Akụkọ banyere Castle - CASTLEVINICA.COM
Akụkọ ihe mere eme nke ụlọ a malitere na 1082 mgbe e wuru ya na mkpọmkpọ ebe nke mgbidi Rom. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, na 1469 na 1471, ndị agha Turkey wakporo ya. Mgbe ahụ, na 1520, onye nwe ụlọ ahụ laghachiri na ezinụlọ Semenich, wee gaa n'ihu mmalite nke narị afọ 17th. N’afọ 1555, ọ fọrọ nke nta ka ọkụ gbue ụlọ ukwu ahụ, naanị sọọsọ ụlọ ekpere ahụ e wuru na narị afọ nke 14 ka a hapụrụ n’enweghị ihe mere ya. Enweghị ozi a pụrụ ịdabere na ya banyere onye nwe ya na narị afọ nke 16 na 17 nke ikpeazụ, mana site na narị afọ nke 18 Vinitsa gbahapụrụ, wee nwee ezinụlọ ọzọ, n'etiti narị afọ, site n'aka ezinụlọ Guzik. N’afọ 1856, Frank Frido zụtara ụlọ a na 1882, ọ resịrị ya ụlọ ọrụ Alpe Montangesellschaft, mgbe ahụ Henrik Grunwald zụtara ya na 1888. Thelọ a gbara ọkụ ọzọ na 1874 yana kwa n’afọ 1878. Mgbe nke ahụ gasịrị, e resịrị ya ọtụtụ oge site n'aka ndị bi n'ógbè ahụ, ruo mgbe Micha na Piotr Malich zụtara ma nwee ala ahụ ruo ọtụtụ afọ. Frank Michelik wee bụrụ onye nwe ikikere nke ihe owuwu nke ụlọ na 1925, kemgbe ahụ nnukwu ụlọ ahụ bụ nke ụmụ ya.
Vinitsa na gburugburu ya juputara na ebe obibi ndị ochie na olili ozu. Dika nsonaazụ usoro nke mounds (ili 353) na mbido narị afọ nke 20, a chịkọtara ọtụtụ ihe 20 puku ihe, wee mesịa buru ha gaa America, ebe e rere ha na 1934 na mmachi a na-emeghe na New York.
Uwe ogwe aka nke Vinitsa pụrụ iche bụ uwe nke ogwe aka nke Janez Valvasor (Opus insignium armorumque, 1687-1688)
Uwe na-acha anụnụ anụnụ nke uwe aka na-egosipụta ọla edo dị egwu nke nwere ụyọkọ mkpụrụ vaịn. Griffin na-egosipụta obi ike, ihe ịma aka, & ịmụrụ anya, na ọnọdụ dị egwu pụtara njikere ịlụ ọgụ. Agba anụnụ anụnụ nke kwaaji ahụ pụtara nsọpụrụ, ịkwụwa aka ọtọ, iguzosi ike n'ihe & nkwụsi ike. Agba ọla edo na-anọchite anya ịdị ukwuu, ugwu, ugwu & akụnụba. Yọkọ nke mkpụrụ vaịn na-anọchi anya isi alaka nke ndị nwe ụlọ ahụ.
Ọnọdụ nke Mweghachi Art
site 2014-2015 mweghachi na nwughari nke nnukwu ụlọ ahụ rụrụ site na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ MIRAG INVEST DOO, nke nwere ikike na nnukwu ụlọ ahụ kemgbe oge opupu ihe ubi nke 2014. N'oge nke mmalite nke mweghachi ọrụ naanị akụkụ ndị fọdụrụ nke ụlọ mbụ ahụ bụ nnukwu ụlọ obibi na obere mgbidi nke mgbidi. Otú ọ dị, nnukwu ụlọ ihe onwunwe ugbu a, e weghachiri eweghachi na-enwe ike na-enwe site na ọ bụ ọhụrụ nwe ruo ọtụtụ afọ nke akpọrọ oké echeta na-abịa!